Matias Wired Keyboard, yakawedzerwa keyboard kune avo vasingade zvinonetsa | Ndinobva mac
Matias Wired keyboard, yakawedzerwa keyboard kune avo vasingade zvinonetsa
louis padilla | | Accessories
Kana iwe uchitsvaga anoshanda zvizere USB kiibhodhi neMac yako, usapinda muchitoro cheApple nekuti yakagara ichingoisiya ichifarira waya dzisina waya. Makarobhoti emakhibhodi akasununguka uye ane zvakawanda zvakanaka, asi kune vashandisi vazhinji vanosarudza kuvimbika kwekhibhodi yakajairika neayo USB tambo, uye ndosaka Matias atangisa rake «Wired Aluminium Khibhodi».
Ine dhizaini uye zvishandiso zvinoita kuti zviite zvakafanana nekhibhodi yakawedzerwa yakapihwa naApple kusvika pasati papfuura kare iri imwe nzira yakanakisa kune avo vanoda kukanganwa nezvekuchaja komputa yavo. Takambozviedza uye tinokuudza zvatinoona.
1 Kunyanya yakagadzirirwa Mac
2 Zvakanakira tambo ye USB
Kunyanya yakagadzirirwa Mac
Iyo keyboard inoitwa kuti ishandiswe neMac, saka hauzopotsa chero kiyi dzatinowanzoshandisa neApple inoshanda sisitimu. Kupenya kutonga, vhoriyamu kutonga, Mission Kudzora, cmd ... nekhibhodi yeMatias haufanire kudzokorora chero kiyi Kuti zvese zvishande zvakanaka, zvinotorwa kunze kwebhokisi uye zvakabatana kune komputa yako. Iyo keyboard yenhamba inobatsirawo kwazvo.
Kwete makiyi chete asi dhizaini yese uye zvishandiso zvekhibhodi pachayo zvakangofanana neApple. Anodized aluminium uye inobata yakafanana chaizvo nekhibhodi yekutanga iyo kambani yakatengesa kusvika nguva pfupi yadarika. Mushure memwedzi yekushandisa iyo backlit keyboard iyo iyo imwecheteyo brand inotengesa uye kuti isu tinoongororawo mukati ichi chinyorwa Ini ndinogona kutaura kuti yakanyatsonaka kunyora pairi.
Zvakanakira tambo ye USB
Kunyangwe ini ndiri mutendi akatendeka mune isina waya tekinoroji, ndinofanira kubvuma kuti kuve nekhibhodi ine USB tambo kwakagadzikana, uye iyi Matias keyboard ine zvimwe zvikonzero zvakawanda. Kunze kwebhenefiti iri pachena ye kwete zvinoenderana nekuchaja zvakare iyo keyboard, pano isu tinofanirwa kuwedzera imwe yakakosha kwazvo: kuve nemaviri madoko e USB anotendera iwe kubatanidza zvishandiso zvakanaka.
Kuwana izvo zvengarava zvemashure zveMac yako harisi iro basa rakanyanya kusununguka pasirese, uye nekiyi keyboard inopfuurwa nekutenda kune madoko maviri eUSB ari pamakona ayo. Iwo haasi 3.0 ekumhanyisa madoko, saka iwo haana kuitirwa makuru mafaira ekuchinjisa, asi kune dzimwe nguva ekunze ekurangarira ndangariro.
Kunyangwe iyo tsika ichiita senge isingadziviriki kuenda kune zvinongedzo zvine waya isina kubatana, wired keyboards anoramba aine vateereri vanogutsikana kuti ndiwo akanakisa sarudzo yekushandisa pamatafura, yekubatanidza ekuchengetedza ndangariro. Matias Wired Keyboard inosangana neese aya mapoinzi uye zvakare ine dhizaini yakafanana neiyo ikozvino yakasiyiwa Apple USB keyboard. With mutengo we € 69,99 en Machinists ndiyo yakanakira sarudzo kune avo vanoda iyo USB keyboard ye Mac yavo.
Matias Wired Khibhodi
Kudzokorora kwe: louis padilla
Kurongwa kwakakosha muSpanish
Makiyi ekhibhodi akaenderana ne macOS
Mawadhi maviri e USB ekubatanidza ndangariro dzekunze
Zvinhu zvekutanga uye dhizaini
Kwete kudzosera kumashure
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Matias Wired keyboard, yakawedzerwa keyboard kune avo vasingade zvinonetsa
Unsplash Wallpapers, uchichinja iyo Wallpaper yeMac yako
Plex DVR inosimudza kugadzirwa kweApple TV kune iyo nth degree